५ जेष्ठ २०७९, बिहिबार ८:०२
कपिलवस्तुमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले शिवराज नगरपालिकाको मेयर जित्ने लगभग पक्कापक्की भएको छ ।
यद्यपि अन्तिम मतगणना भने जारी छ । अहिले शिवराज नगरपालिकाको वडा नं. ६ मा मतगणना जारी छ । हालसम्म यो वडाको १६ सय मत गणना सकिदा एमाले भन्दा राप्रपा अगाडी देखिएको छ ।
शिवराजको मेयरमा राप्रपाका अजय थापा र एमालेका महादेव पोख्रेल बीच कडा टक्कर छ । अरु उम्मेद्वार लगभग मेयरको दौडबाट पछाडी परेका छन् ।
वडा नं. ६ को अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भएपछि मात्र शिवराको बाँगडोर कस्ले सम्हाल्छ त्यसले निर्धारण गर्छ । तर यो वडाको रुझानले थापाको मेयर यात्रालाई अब कसैले रोक्न नसक्ने स्थिति छ ।
थापाले हालसम्म ७ हजार ३ सय २७ मतका साथ अग्रता लिइरहदा एमालेका पोख्रेलले ६ हजार ९ सय ७६ मत पाएका छन् । पोख्रेलले पाएको मत भन्दा थापाको मत ३ सय ५१ ले बढी छ । ५ सय मतान्तर बीच नै शिवराजको चुनावी परिणाम बाहिर आउने आकलन छ ।
शिवराजको मेयरमा पुग्न एमालेले वडा नं. ६ को जारी मतगणनामा राप्रपालाई उछिन्न पर्ने थियो । तर, नतिजा त्यस्तो आएन् । यो वडामा कांग्रेस अगाडी छ । कांग्रेसका मेयरका उम्मेद्वार हुमकान्त खनालले १६ मत गणना गर्दा ५ सय ५७ मत पाएका छन् भने, दोस्रोमा राप्रपाका थापाले २ सय २४ मत पाएका छन् ।
एमालेका पोख्रेल १ सय ३५ मतका साथ अगाडी बढेका छन् । सबैलाई आश्चर्यचकित पार्दै थापाले शिवराजको मेयरमा पदासिन हुने सम्भावना छ ।
११ वडा रहेको शिवराजमा सुरुवात देखि अग्रता बढाउँदै गएका थापा विहीबार अन्तिम मतपरिणाम आउँदासम्म अग्रस्थानमै रहे ।
गएको निर्वाचनमा शिवराजको मेयर र उपमेयर एमालेले जितेको थियो । ०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचन थापा स्वयम राप्रपाबाट उम्मेद्वार थिए । मेयरमा पराजित थापा मंसीरमा सम्पन्न संघीय र प्रदेशको चुनावमा नेपाली कांग्रेस प्रवेश गर्दै प्रदेशसभामा चुनाव लडेका थिए । त्यहाँ पनि पराजित भएका थापा मनोनयर दर्ताको अघिल्लो दिनसम्म कांग्रेसमा सक्रिय थिए ।
पार्टीले मेयरमा टिकट नदिए पछि पार्टीबाट विद्रोह गर्दै राप्रपा लागेका थापा अन्ततः मेयरमा निर्वाचित भए । शिवराजमा कांग्रेसका मेयरका उम्मेद्वार हुमकान्त खनाल तेस्रो स्थानमा सिमित रहे ।
नगरको उपमेयरमा भने शिवकुमारी थारु निर्वाचित हुने पक्कापक्की छ । निवर्तमान थारु आफ्नो प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै उपमेयरमा निर्वाचित हुने भएकी हुन् ।